“Ny ran’i Jesosy Zanany no manadio antsika ho afaka amin’ny ota rehetra.” 1 Jaona 1:7
“Tsy mba manao amintsika araka ny fahotantsika Izy, na mamaly antsika araka ny helotsika.” Salamo 103:10
Kaina sy Abela no zanaky ny mpivady noarìna voalohany. Noho ny fialonana sy ny fankahalana, dia novonoin’i Kaina ny rahalahiny. Ka hoy Andriamanitra taminy: “Inona no nataonao? Ny feon’ny ran’ny rahalahinao mitaraina amiko avy amin’ny tany” (Genesisy 4:10). Ny namonoana an’i Abela dia mitaky famaizana, valifaty ary onitra.
Latsaka teo amin’ny hazofijaliana ny ran’i Jesosy, Ilay Zanak’Andriamanitra. Olona ratsy fanahy no namono an’i Jesosy, kanefa ankehitriny dia tsy mba miresaka valifaty ny rany. Famotsoran-keloka no resahiny. Anio ianao dia mbola afaka mandre izany feo izany, feo manome valiny avy amin’Andriamanitra, momba ny otan’ny olona.
Teo amin’ny hazofijaliana, Jesosy Kristy, Ilay Zanak’Andriamanitra, dia nanolotra ny tenany ho sorona ho an’ny mpanota. Tsy tiany hiharan’ny fanamelohana sahaza azy ireo ny olombelona, fa tiany hahazo famotsoran-keloka. Izay mandà na manao tsinontsinona izany famotsoran-keloka izany, dia mitoetra eo ambany famaizan’Andriamanitra.
Ahoana no ahazoana mandray manokana izany famotsoran-keloka izany? Miaiky ny toetrantsika eo anatrehan’Andriamanitra sy mivavaka an-kitsimpo, milaza aminy ny fahotantsika. Hoy ny Tompo Jesosy: “Izay manatona Ahy dia tsy mba holaviko mihitsy” (Jaona 6:37). Koa afaka matoky tanteraka an’i Jesosy Kristy isika: maty nisolo antsika Izy, nanafaka antsika ny fahafatesany. Manome antoka ny amin’izany ny Baiboly: “Ny ran’i Jesosy Zanany no manadio antsika ho afaka amin’ny ota rehetra”. Ny “nanavotana anareo [dia] … ny ra soan’i Kristy” (1 Petera 1:18,19).